Ipad pro entsha ekhokelwa mini-iya kuxabisa i-699 yeedola ukulungisa ngaphandle kwe-applecare +
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-mini-LED ye-iPad Pro entsha iya kubiza i-699 yeedola ukulungisa ngaphandle kwe-AppleCare +
Iwaranti engaphandle kwe-12.9-intshi ye-iPad Pro 2021 iya kubiza i-699 yeedola ukulungisa ngaphandle kwe-AppleCare +, ngohlaziyo oluhlaziyiweyo Inkonzo ye-iPad kunye neTshathi yokulungisa ibonwe ngu IiRumor .
Le yi- $ 50 ngaphezulu kwemali yokulungisa kwimodeli yangaphambili. Intlawulo yokulungisa icinge ukuba inyukile kuba Isizukulwana sesihlanu i-12.9-intshi ye-iPad Pro ifaka isikrini esitsha esine-mini-LED esine-Liquid Retina XDR.
Le ntlawulo iya kusebenza ngomonakalo owenzeke ngengozi nokuba ngaba isixhobo eso singaphantsi konyaka wokusetyenziswa ukuba awunayo iAppleCare +. Ukuba kukho umba ngenxa yempazamo yokuvelisa, iya kugutyungelwa yiwaranti yonyaka omnye wokuqala.
Iintlawulo azitshintshanga kwimodeli entsha ye-11-intshi egcina i-Liquid Retina LCD screen kwaye iya kuxabisa i-499 yeedola ukulungisa ngaphandle kwe-AppleCare's +. Ngaphantsi kwe-AppleCare +, umrhumo wenkonzo uyi- $ 49 yazo zombini iimodeli. I-Apple ibiza i-149 yeedola kwiminyaka emibini ye-AppleCare's +. Ukuba ufumana umrhumo we- $ 7.99, uya kugubungela lonke ixesha lokuphila kwesixhobo.
Eminye imimangaliso ye-12.9-intshi iPad Pro & apos; s mini-LED tech
Itekhnoloji ye-mini-LED inikezela ngeenkcukacha ezithe kratya, umahluko phakathi kwemibala, kunye nemibala eqaqambileyo, kodwa kukho ezinye iindlela zorhwebo ezichaphazelekayo. Umzekelo, iyenzile iproad entsha eyi-12.9-intshi ye-iPad Pro yancinci, okuthetha ukuba yiKhibhodi yomlingo yoqobo awuzukuphumelela ngokufanelekileyo Kwaye kuya kufuneka ufumane entsha ebiza i-349 yeedola. Isilayidi esincinci se-LED siqala kwi- $ 1,099.
Izikrini zeMini-LED zikwanzima ngakumbi ukuvelisa kuneepaneli zeLCD kwaye oku kulindeleke ukuba kukhokelele kunikezelo lokunqongophala. Uqikelelo lonikezelo lwemodeli ye-intshi eyi-12.9 sele betyibilika ngoJulayi. Umahluko we-11-intshi uya kuqala ukuhambisa usuka Ngomhla wama-21 . Uku-odolwa kwangaphambili kuvulwe ngo-Epreli 30.
Amacwecwe amatsha anikwe amandla yi-chip ye-M1 kwaye aza nakwiimodeli ze5G. Zivakala njengenye ye iipilisi ezilungileyo ka 2021. IApple inguye ukuqikelela imfuno ephezulu kwii-iPads zayo zamva nje.
xfinity mobile vs & t
isipili Android kwi-pc usb
I-Samsung kunye neapos; Ukutshaja ngokukhawuleza iPad yokutshaja ngaphandle kwamaphepha (kwiNqaku5 kunye nomda we-S6 +) kubiza i $ 69.99
Ingxelo: I-Samsung Galaxy S6 kunye ne-Samsung Galaxy S6 Edge ayizukungena manzi
I-AT & T ithatha i-Surface Go 2 LTE kwaye umbala omtsha we-Surface Earbuds uyeza kungekudala
Amaxabiso efakelo ye-Apple iPhone 5 kunye ne-Apple iPhone 5c kwi-AT & T kunye ne-T-Mobile ityhilwe
Uyenza njani ibrowser yeselfowuni kwi-Android ukufunda umbhalo wewebhu ngokuvakalayo kuwe
IOS 15 kunye ne-iPadOS 15 zenza iiApple & iiApos; Amanqaku abaluleke kakhulu kunakuqala: Zonke izinto ezintsha
Ungasebenzisa i-QuickTime ukwenza ukuba kusetyenziswe iPeriscope kwi-Mac, phantse ngokugqibeleleyo
I-T-Mobile ithi i-Galaxy Note 8 yayo izakuqala ukuhambisa kwakamsinya (kwabo & ngaphambili
I-Beats Solo Pro ii-headphone ezingenazingcingo zizisivumelwano kwiWalmart namhlanje; Kungcono ukhawuleze
Iingcebiso kunye namacebo e-iOS 14: Supercharge amava akho e-iPhone nge-iOS 14